भन्सार कार्यालय विराटनगरद्वारा ४० अर्ब राजस्व संकलन – Bihani Online
विराटनगर,असोज,६-एकीकृत भन्सार जाँचचौकी रानी विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल रू. ४० अर्ब आठ करोड १९ लाख १३ हजार राजस्व संकलन गरी ८८ दशमलव ४५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
सो अवधिमा कार्यालयले रू. ४६ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ८९ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा ८८ दशमलव ४५ प्रतिशत प्रगति गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा रू. १२ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख ८४ हजार बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख शिव भण्डारीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सो वर्ष कुल रू. २८ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख २९ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । सोही वर्ष कार्यालयले कुल रू. ४९ अर्ब ६४ करोड ६० लाख ४६ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा रू. २१ अर्ब २८ करोड २६ लाख १७ हजारले कम अर्थात् ५७ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र लक्ष्यमा प्रगति हासिल गरेको थियो ।
कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रू. ३२ अर्ब ८१ करोड ३० लाख ८३ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । सो अवधिमा रू. ३१ अर्ब २४ कारेड ४८ लाख ८१ हजार लक्ष्यमा रू. एक अर्ब ५६ करोड ८२ लाख दुई हजारले बढी अर्थात् १०५ दशमलव शूल्य दुई प्रतिशत प्रगति गरेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल रू. ४२ अर्ब ५३ करोड १९ लाख १८ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा रू. ३८ अर्ब २८ करोड ९४ लाख ८८ हजार मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको दुई महीना साउन र भदौमा कुल रू. सात अर्ब २१ करोड ९४ लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
सो राजस्व साउन महीनामा रू. तीन अर्ब ३४ करोड ९६ लाख ९८ र भदौमा रू. तीन अर्ब ८६ करोड ९७ लाख १३ हजार संकलन भएको हो । यी दुई महीनामा कार्यालयले साउनमा ११५ दशमलव ८२ प्रतिशत र भदौमा १०० दशमलव १३ प्रतिशत प्रगति गरेको भन्सार अधिकृत प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि राजस्व लक्ष्य भन्दा कम उठ्नुको कारण सो वर्ष फागुन महीनादेखि आयात घट्नु, जोगबनी र बथनाहाको बीचमा पर्ने मिरगञ्ज पुलमा अवरोध आउनुको कारण रहेको बताइएको छ ।
गएको अर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिनु र नेपाल सरकारले गएको चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दी घोषणा गरेको कारण व्यापारिक कारोबार ठप्प हुनु, आयात निर्यात नहुनुले पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको भन्सार प्रमुख शिव भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनले यस्तो समस्याको बाबजुद पनि कार्यालयले निरन्तर भन्सार राजस्वमा निगरानी बढाएकोले धेरै हदसम्म भन्सार उठाउन सफल भएको चर्चा गरे । रासस
आज बार दिवस नेपालगंजमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईदै
केपी सरकार भंग भएको हो, संसद जीवितै छ: प्रचण्ड